Indonesia in Focus: Politika ara-toekarena Indoneziana fonosana dia hanosika izao tontolo izao toekarena manan-kery
Politika ara-toekarena Indoneziana fonosana dia hanosika izao tontolo izao toekarena manan-kery
Ny mitaingina Tsy vita (382)
(Fizarana telon-jato sy roa amby valo-polo, Depok, West Java, Indonezia, November 12, 2015, 19:05 AM)
Filohan'ny Joko Widodo Indonezia dia nandefa ny fonosana ny politika ara-toekarena enina no antenaina mba hamporisika an-toerana sy avy any ivelany mitombo fampiasam-bola, ary mandrisika firoboroboana ara-toekarena any Indonezia mitovy ny anjaran'ny tsirairay.
Ohatra iray, raha ny toekarem-pirenena dia nitombo ihany no 4.5 isan-jato isan-taona, dia tamin'ny 2015 ny jono sehatry nitombo valo isan-jato sy ny fambolena nitombo avy eo ho eo ny 6 isan-jato, na dia ny fanafahana ny fahenina fonosana ny politika ara-toekarena sy ho arahan'ny Ny dingana manaraka ny politika ara-toekarena fonosana, dia tsy azo atao tamin'ny 2030 Indonezia Ho tsara lavitra noho ny toe-karena an'i Aostralia sy Korea Atsimo, Indonezia ary na dia ankehitriny aza efa nihoatra ny herin'ny toe-karena sy ny UK manana ny mety ho laharana faha-9 toe-karena izao tontolo izao.
Ary izany no indray Azia toekarena mitombo haingana no miovaova ny toe-karena vokatry ny Etazonia sy Eoropa. Izany no mahatonga ny United States nanomboka jerena kokoa Azia, ary miovaova ny toe-karena nanomboka akaiky an'i Eoropa sy Moyen-Orient ny fananganana Poros Trans Pacific firenena Fiaraha-miasa ara-toekarena.
Jokowi tonga mihitsy ny handrombaka fahefana World Economic roa mpiray Strength
Beijing - fampiharana ny APEC vovonana tamin'ny 2014 tany Beijing, Sina lasa ny kianja ny tombontsoa eo amin'ny lavaka roa herin 'izao tontolo izao ny toe-karena, ny Etazonia tamin'ny lafiny iray amin'ny Shina sy Rosia eo amin'ny hafa. Filoha Joko Widodo (Jokowi) izay vaovao any amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tonga ny taolany ny fifandirana teo amin'izy ireo.
Amerikana nanatevin-daharana ny Trans-Pacific Partnership (Trans-Pacific Partnership / TPP). TPP dia fifanarahana ara-barotra malalaka izay nanaraka ny fito ambin'ny folo Firenena ao Azia-Pasifika dia nanaraka ihany koa ny ASEAN sasany firenena, izany hoe Malezia, Singapore, Brunei, ary Vietnam.
Raha niditra tao Rosia Azia-Pasifika ny Free Trade Zone (Free Trade Area ny Asia Pacific / FTAAP). FTAAP dia heverina ho toy ny ezaka mankany amin'ny faritra Toekarena Integration (Rey) fa nizara fanambinana ao amin'ny faritra.
Filohan'ny Repoblikan'i Indonezia Joko Widodo hoy Indonezia fa tsy te-ho fihoaram- fotsiny ny tsena ho an'ny tombontsoa ara-toekarena ny firenena lehibe izay fa ny zava-dehibe dia ny fiaraha-miasa tena afaka manome tombontsoa ho any Indonezia.
"Mazava ho azy, raha mijery ny tombontsoan'ny mitady namana. Ny lalàm-panorenana ihany no miasa maimaim-poana. Te-mahita namana na iza na iza afaka Dong, dia fiainana izao eto. Fa amin'ny firaketana an-tsoratra ny tombontsoam-pirenena, ny mahasoa ny olona ananantsika eo ambany-tafaray, "hoy ny Filoha Jokowi, Alatsinainy (11/10/2014) alina.
Jokowi tsy nety nanao miaramila, rehefa hita mazava tsara ny sary fivoriana miaraka amin'ny mpitarika ny fihaonana an-tampony APEC tamin'ny 2014. Misy nitsangana Jokowi flanked ny filoha Amerikana Barack Obama sy ny Filoha Shinoa Xi Jinping fifanarahana sy ny Filoha Rosiana Vladimir Putin.
"Tena mariky, dia tsy maintsy mamaky. Lasa mihitsy ny handrombaka fahefana izany izahay Loh, "hoy Jokowi raha mandry ny heviny ao ambadiky ny toerana.
Raha raisina ny Trans Pacific Partnership
Executif Talen'ny fianarana ny Azia Afovoany Pasifika (CSAP)
Jokowi ny fitsidihan'ny Filoha tany Etazonia mametraka be dia be ny tombantombana, indrindra fa nanomboka tamin'ny Filoha ny fanambarana izay milaza te-hiaraka Trans-Pacific ny Fiaraha-miasa (TPP).
Izany dia be dia be ny olona mino fa ny politika ivelany an'i Indonezia amin'izao fotoana izao hizotra ho any Etazonia.
Fa afa-tsy ny faniriana mba hanatevin-daharana ny TPP na tsia, dia tokony ho fantatrareo fa amin'izao andro izao, ny fitoeran-javatra ny firenena any amin'ny faritra Pasifika Asia dia tena ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana ara-toekarena.
"Fa afa-tsy ny faniriana mba hanatevin-daharana ny TPP na tsia, dia tokony ho fantatrareo fa amin'izao andro izao, ny fitoeran-javatra ny firenena any amin'ny faritra Pasifika Asia dia tena ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana ara-toekarena"
Azia-Pasifika fikambanana tsy tokony hisolo tena ny firenena ara-politika manokana fandaharam-potoana famoronana fa ny fahatsapana ny fitovian-jo eo amin'ny firenena tsirairay mba ho afaka soa firenena mpikambana rehetra.
Noho izany, ny fanontaniana mipoitra mba hamaly ny fanambarana ny Filoha Jokowi izay te-hamonjy ny TPP dia mikasika ny zavatra stratejika soa izay azo niteraka ny Indonezia?
Alohan'ny hamaliana Mazava ho azy ity raharaha ity dia ilaintsika ny mandinika lalindalina kokoa momba ny mety izay no tompon'ny Indonezia ao amin'ny kianja iraisam-pirenena.
Ankehitriny dia fantatsika fa ny toe-karena maneran-tany dia miovaova hatrany ny Atlantika ho any amin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana toy izao ny Pasifika tsy mivantana ny andraikitry ny Azia-Pasifika firenena mba ho tena kajy. Ary Indonezia amin'izao fotoana izao ny iray amin'ireo tena mety ho lasa mpilalao lehibe ao amin'ny faritra Azia Pasifika.
Liana amin'ny firenena isan-karazany no nanaporofo ny kijanona ny fifandroritana eo amin'ny miaramila ny eran-toe-karena mba hahazo ny sain'ny Indonezia. Ny iray tamin'izy ireo no nanao ny fanatitra isan-karazany fampiasam-bola vola mba hanamorana ny fampandrosoana fandaharam-potoana ao amin'ny firenena.
Iray amin'ny lafiny sarintany politika mety ho toerana ao Indonezia dia tena stratejika ny manana efatra ny sivy mangeja teboka (tery ety), izay nanjary ny lehibe indrindra eran-dranomasina sakeli-dalana eto varotra izay ny Andilan-dranomasin'i ny Malacca, Sunda Andilan-dranomasin'i, ny Andilan-dranomasin'i ny Lombok sy Makassar Andilan-dranomasin'i.
Miovaova ny toe-karena any amin'ny faritra Pasifika Azia ankolaka hampitombo ny boky ny fizarana ny fananana ho an'ny Azia-Pasifika faritra. Izany mahatonga ny firenena mandroso mitsaha-mitombo miantehitra amin'ny toerana stratejika Indonezia.
Rehefa Indonezia dia vonona foto-drafitrasa sy fizarana rafitra mempuni fiankinan-doha matanjaka Mazava ho azy fa dia mitombo hery toekarena.
Izany dia hita amin'ny Jokowi amin'ny Indonezia toy ny andry fototry dranomasina trigger izao tontolo izao. Mba hanatanterahana izany, Indonezia dia mitaky sahaza-dranomasina foto-drafitrasa fampandrosoana.
Mba hahatakatra ny fananganana ny fotodrafitrasa dia mazava-dranomasina manan-danja mitaky fampiasam-bola vola. Indonezia mila manaiky firenena mba handray anjara sy hahatsapa ny mety ho an'i Indonezia no firenena axis-dranomasina.
Amin'ny lafiny iray hafa, dia hita any amin'ny faritra Pasifika Asia izay efa ela no taitra soliditasnya izany hoe ASEAN. Amin'ny lafiny iray hafa, Indonezia dia iray amin'ireo firenena pahefana any amin'ny faritra ASEAN izay manana fahafahana ara-toekarena vaovao hanorina hery ao Azia Pasifika vanim-potoana.
ASEAN mafy tanjona azo refesina fahombiazana ara-toekarena dia mampatahotra ho an'ny isan-karazany firenena mahery eto amin'izao tontolo izao. Noho izany, ny fahaizany Indonezia regroup ao amin'ny ASEAN no hamaritra ny varotra herin 'Indonezia eo imason'ny' izao tontolo izao.
Ny matanjaka kosa ny varotra herin 'Indonezia, ny lehibe kokoa ny fahafahana ho an'ny Indonezia mba hiteny amin'ny fikambanana iraisam-pirenena.
"Ny matanjaka ny varotra herin 'Indonezia, ny lehibe kokoa ny fahafahana ho an'ny Indonezia mba hiteny amin'ny fikambanana iraisam-pirenena"
Koa raha tonga aho miverina ho famerenana ny Trans Pacific Partnership hatramin'ny nitsanganany raha ny marina ho hita toy ny fahafahana na ny fandrahonana.
Fahafahana ho amin'ny fahombiazana ny fandaharam-potoana an-toerana mety ho azo, fa mila ihany koa ny tsara napetraka.
Indonezia tokony ho mailo fa rehefa milalao ao amin'ny kianja filalaovana ny faritra midadasika kokoa toy izany dia tsy maintsy mbola mifototra amin'ny ASEAN. ASEAN no tsara indrindra hanombohana alohan'ny intsony any an-Pacific Partnership Trans.
Satria ASEAN no antenaina mba ho "Eoropeana" tany Azia no ho ny ara-toekarena Azia foibem-Pasifika. Ao amin'ny ny fahafantarany izany, raha te-hanitatra Indonezia ny fiaraha-miasa amin'io lafiny io ny Trans Pacific Partnership, Indonezia dia tokony handinika tsara ny hatraiza ny varotra izay Indonezia toerana ao amin'ny fikambanana.
Hitantsika fa ny Trans Pacific Partnership dia tarihin'ny ny United States izay tonga dingana mahay mampifandanja ny fitarihan'ny Shina ao amin'ny faritra Azia Pasifika.
Mazava, rehefa niditra ny Trans Indonezia Pacific Partnership dia namoha ny varavaran'ny fiaraha-miasa amin'ny Etazonia sy ny mpiara-dia aminy.
Izao angamba lainga malalaka sy mavitrika ho nilalao politika ny Filoha Jokowi. Mba hahatonga Indonezia toy ny axis ny dranomasina izao tontolo izao, Indonezia dia tokony ho afaka manaiky ny firenena lehibe.
Na izany aza dia zava-dehibe ny mahatsiaro fa tsy mora isika hanapa-kevitra ny hiaraka na tsia amin'ny Pacific Partnership Trans ity. Noho ny tsy fisian'ny fifanarahana mazava momba ny fiaraha-miasa toy izany dia horaisina.
Raha kely indrindra dia misy zavatra roa ho eo amin'ny fandaharam-potoana ny Trans Pacific Partnership fa deregulation ny fanondranana-Import, izay midika hoe fanitarana ny tsena sy ny fizotran'ny ny fampiasam-bola mora kokoa.
Rehefa eo ny mety ao Indonezia amin'izao fotoana izao, raha ny marina ny tena ilaina maika dia ny fampandrosoana ny dranomasina foto-drafitrasa.
Ny fanapahan-kevitra raha tsy hiaraka na ny Trans Pacific Partnership tokony mifototra amin'ny herin'ny Indonezia ao ASEAN ary koa ny manohana ny fampandrosoana ny dranomasina foto-drafitrasa.
Joko Widodo Filoha nanambara ny fonosana ny politika ara-toekarena
(BBC) - fonosana ny politika natao mba hifindra indray Toe-karena
Joko Widodo nanambara ny Filoha politika ara-toekarena fonosana izay misy dingana telo ao amin'ny Lapam-panjakana tamin'ny Alarobia (09/09).
Ny dingana fahatelo dia ahitana ny tosika ho amin'ny fifaninanana ny orinasa-pirenena amin'ny alalan'ny deregulation, fampiharana ny lalàna sy ny raharaham-barotra azo antoka.
Hoy ny filoha misy 89 154 fitsipika overhauled avy nanolo-kevitra. "Koa izany mety hampahery ny fiovaovan'ny ka nanapaka ny fitsipika izay manelingelina ny orinasa," hoy ny filoha.
Ny dingana faharoa dia ny hanafaingana ny tetikasa stratejika pirenena manala ny fanivanana, ny fanomezana ny fahazoan-dalana, vita ny fisehon'ny, ary ny haingana ny entana sy asa.
Farany, ny filoha dia mikatsaka ny hampitombo ny fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny fananana.
"Ny politika ara-toekarena fonosana dia hampitombo ny tena sehatra. Mino aho fa ny dingana voalohany ny ara-toekarena entana politika dia hanamafy orina ny orinasa-pirenena, fampandrosoana orinasa madinika, manamora Inter-paritra varotra, mandrisika fizahan-tany, fanatsarana ny hahasoa ny mpanjono," hoy izy.
Ny filoha hoy ny politika ara-toekarena fonosana fonosana no natomboka voalohany. Ny fonosana faharoa, araka ny fandrindrana minisitry ny ny Toe-karena, Nasution, dia nanambara ao amin'ny fahefatra herinandro ny Septambra.
Anisan'ny dingana maro antsoina hoe ny filoha, misy ezaka hifindra ny any ambanivohitra sy ny toe-karena amin'ny alalan'ny haingana manatsotra ny fampiasana ny vola noho ny asa tanàna-be foto-drafitrasa fampandrosoana.
Teo aloha, ny governemanta Fanambarana ny volavolan-dalàna tamin'ny 2016 volavolan-teti-bola eo anatrehan'ny mpikambana ao amin'ny MPR / DPR, tamin'ny Aogositra, teti-bola sy ny famindrana vola omena ny faritra sy ny vohitra ho nihatsara mba lehibe noho ny asa fanompoana sy ny sampan-draharaha fandaniana.
Ao amin'ny volavolan-teti-bola 2016, governemanta foibe fandaniana ho tonga any Rp 1339,1 tapitrisa tapitrisa, miaraka amin'ny antsipirihany ny asa fanompoana sy ny sampan-draharaha fandaniana hahatratrarana tsy Rp780,4 tapitrisa tapitrisa sy ny fandaniana asa fanompoana sy ny sampan-draharaha misahana ny Rp558,7 tapitrisa tapitrisa.
Ny famindrana ny faritra sy ambanivohitra tonga Rp vola 782, 2 tapitrisa tapitrisa. Ny petra-bola isam-paritra dia ahitana ny teti-bola ho an'ny Rp735,2 famindrana tapitrisa tapitrisa sy ny tanàna vola tonga Rp47 tapitrisa tapitrisa.
Foto-drafitr'asa fampandrosoana Antenaina mba handroaka ny toe-karena ao an-tanàna.
Izay hahasoa ny mpanjono
Rehefa naneho ny politika ara-toekarena fonosana, voalaza ihany koa ihany koa ny hahasoa ny mpanjono. Minisitry ny Toe-karena fandrindrana hoy Nasution hisy ny politika LPG ho an'ny mpanjono.
Nasution nanamarika fa raha misy mpanarato teny an-dranomasina nandritra ny 30 litatra ny solika danja Rp207.000, dia mampiasa ny fitaovana mpanova LPG mpanarato dia olana ihany Rp62.100. Mba, rehefa mahazo trondro 10kg mpanjono mihevitra ho manana ho mendrika Rp20,000 isaky ny kilao, dia mety handray ny tombony ny Rp137.900.
"Hitombo izany ny famokarana trondro tratra miaraka amin'izay koa, fanatsarana ny hahasoa ny mpanjono," hoy Nasution.
No andrasana mba hamoaka ny fonosana ny politika ara-toekarena, fidiram-bola-panjakana dia hampitombo hery ny fividianana hery.
Politika ara-toekarena boky fonosana Karakarao tsara roa fahazoan-dalana
Araka ny Bloomberg, ny Rupiah manohitra ny US dolara ny Talata (09/29) dia nanohina Rp14.818 isaky ny US $ 1.
Namoaka ny governemanta Indoneziana dingana roa ny politika ara-toekarena fonosana misy fepetra maromaro handamina sakana amin'ny fampiasam-bola sy ny fahazoan-dalana.
Ny fepetra nambara ireo araka ny faritra ny asa maro ny asa fanompoana, anisan'izany ny Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Ala sy ny Ministeran'ny bola ny Talata (29/09).
Any amin'ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy ny Ala, ohatra, ny Minisitra filazana Siti Nurbaya dia hahatonga ny efatra mamela ny fampiasana ny hazo any an'ala ho famokarana fahazoan-dalana antsoina hoe "vatan-kazo fampiasana Fahazoan-dalana".
Taty aoriana ao amin'ny fanjakan'ny ny Ministeran'ny Fitantanam-bola, ny Minisitry ny Bambang hoy Brodjonegoro fa hanome hetra fandrisihana ho an'ny mpanondrana ny voninkazo izay mitandrina ny fanondranana vola (DHE) ao amin'ny banky ao amin'ny firenena nandritra ny fotoana ela.
Hanomboka ara-toekarena eo anivon'ny fonosana ny rano indray mitete avy amin'ny boloky hazo sy ny tahan'ny fifanakalozana.
Araka ny fandrindrana minisitry ny ny Toe-karena Nasution, ny politika boky fonosana roa dia mifantoka amin'ny foto-drafitrasa tsy hanahirana sy ketra mba hamporisika ny fizotran'ny ny fampiasam-bola any Indonezia.
"Tsy mila be dia be izao, izay zava-dehibe daka. Daka iray izay fanompoana haingana ny fampiasam-bola," hoy Nasution.
Cabinet Sekretera Pramono Agung hoy ny governemanta foibe no hampianatra ny manam-pahefana mba hanafohezany ny fanaovana raharaham-barotra license.
"Izany rehetra izany dia ny hanome ny tsara famantarana ho amin'ny fiaraha-monina sy ny firenena manodidina izay Indoneziana namana amin'ny olona izay te mampiasa vola any Indonezia," hoy Pramono.
Dingana roa ny politika navoaka fonosana telo herinandro taorian'ny fonosana politika voalohany navoaka tamin'ny Septambra 9 farany.
Ny voalohany dia ahitana ny tosika fonosana ho ny fifaninanana ny orinasa-pirenena amin'ny alalan'ny deregulation, fampiharana ny lalàna sy ny raharaham-barotra azo antoka.
Package avy eo anivon'ny halemy ny Rupiah. Araka ny Bloomberg, ny Rupiah manohitra ny US dolara ny Talata (09/29) dia nanohina Rp14.818 isaky ny US $ 1.
Telo-kevitra momba ny ara-toekarena fonosana boky 3
Nanambara ny governemanta Jokowi ara-toekarena fonosana boky 3. Inona no votoatin'ny ny fonosana dia tanteraka?
Cabinet Sekretera Pramono Agung nanolotra ny fampidirana politika ara-toekarena fanambarana Package III, amin'ny ny Filoha, Jakarta, Oktobra 7
Jakarta, Indonezia - Ny ekipa ara-toekarena ny Filoha Joko "Jokowi" Widodo nilaza ara-toekarena fonosana boky 3, Wednesday, 7 Oktobra. Ny hafatra hanamafy ny fifaninanana ny raharaha izao tontolo izao eo amin'ny toe-karena mitotongana.
"Mino isika fa io fonosana politika ambaratonga fahatelo 'daka'. Foana ny mahatsapa ankehitriny, izay efa nanatanjaka ny Rupiah be, "hoy Lehiben'ny Kabinetra Sekretera Pramono Agung Wibowo amin'ny Lapan'ny-panjakana amin'ny Alarobia tolakandro.
Toe-karena fandrindrana Minisitry Nasution nanampy fa ao amin'ny boky fahatelo io fonosana tsy mandrisika ny hampidina ny fandaniana ny orinasa.
Eto, zava-dehibe telo olana mifandray amin'ny ara-toekarena fonosana.
Ny fihenan'ny ao amin'ny vidin-tsolika menaka (BBM), mandatsa-dranomaso, ary ny herinaratra
Ny vidin'ny solika fiaramanidina, ZARY RANO solitany mandatsa-dranomaso (LPG) 12 kilao, Pertamax sy mahomby Pertalite nidina hatramin'ny 1 Oktobra, 2015.
Ny vidin'ny solika dia nihena ny solika Rp 200 isaky ny litatra, ka ny antsinjarany vidin'ny solika famatsiana solika ho Rp karazana 6.700 isaky ny litatra.
Ny fihenan'ny ao amin'ny vidin'ny solika solika ihany koa ny solika mihatra karazana tsy famatsiana gazoaly.
Vidin'ny solika Premium mitoetra ao amin'ny Rp 7.400 isaky ny litatra (Java, Madura, Bali) ary ny Rp 7,300 (ivelan'ny Java, Madura, Bali). Ny vaovao dia manan-kery vidiny avy Oktobra ho Desambra 2015.
Gas vidin'ny. Ny saran'ny ny orinasa avy amin'ny saha entona vaovao aroso araka ny mividy herin 'ny zezika orinasa, izay Nahatratra ho US $ 7 MMBtu (tapitrisa Britanika mafana Units). Raha ny vidin'ny entona ho an'ny orinasa hafa (toy ny Orinasa, seramika, sns) dia mihena araka ny fahafahan'ny tsirairay avy ny orinasa.
Entona Price fampihenana ho tanteraka noho ny fahombiazan'ny ny entona fizarana rafitra ary koa ny fampihenana ny vola miditra panjakana, na Non-ketra (tsy hetra) mandatsa-dranomaso.
Na izany aza, mihevitra ny governemanta ao mandatsa-dranomaso ny fihenan'ny vidin-javatra dia tsy misy fiantraikany amin'ny habetsaky ny vola azo izay ho anisan'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa entona Contract. Ny fihenan'ny ao amin'ny vidin-mandatsa-dranomaso ho an'ny orinasa dia ho mahomby 1 Janoary 2016.
Vidin'ny herinaratra. Herinaratra ny tahan'ny ho an'ny indostria mpanjifa I3 sy I4 dia hampihena ny USD 12 - USD 13 isan-kWh manaraka ny rano indray mitete amin'ny vidin-tsolika (Automatic Tariff Vao mizatra). Discount tahan'ny dia homena hatramin'ny 30 isan-jato ny fandaniana herinaratra amin'ny mamatonalina (23:00) mandra-maraina (08:00), raha ny rafitra herinaratra entana dia ambany.
Fandrisihana governemanta mangataka andro amin'ny fandoavana ny herinaratra volavolan-dalàna amin'ny alalan'ny hatramin'ny 40 isan-jaton'ny tolo-dalàna ny herinaratra voalohany 6 na 10 volana, ary ny orinasa afaka handoa izany hiala tsikelikely. Mihatra manokana ny asa-mafy orinasa ary koa ny orinasa fifaninanana no malemy.
Fanitarana mpandray mpandraharaha ny Business olona Sary nahazoan-(kur)
Mba hanatsarana ny fahazoana ny mpandraharaha amin'ny banky bola, amin'ny alalan'ny fandaharana ny kur, ny Governemanta no nampidina ny zanabola kur avy ny 22 isan-jato ny 12 isan-jato.
Ao amin'ny fonosana politika ity, ny fianakaviana izay manana fidiram-bola tapaka, afaka mahazo kur ho an'ny sehatry ny fandraharahana mamokatra.
Miaraka ity politika ity, banky kur nandroaka mpomba ny ezaka mavitrika mba hanolotra ny olona voakasika, mba hitombo mpandray anjara kur raha mampirisika ny fitomboan'ny mpandraharaha vaovao.
Simplification ny tany fangatahany fahazoan-dalana amin'ny asa fampiasam-bola
Eo amin'ny tany sehatra, ny Minisitry ny Fambolena sy maka sary Planning / National Land Agency, fanitsiana Fitsipika No. 2 2015 amin'ny Service Fenitra sy fitsipika fambolena, maka sary sy Tany amin'ny Fampiasam-bola Asa.
Misy akora fandaharana vaovao izay ahitana zavatra toy ny:
a. Mpangataka hahazo vaovao mikasika ny fisian'ny tany (tany am-boalohany 7 andro amin'ny 3 ora);
b. Fangatahana rehetra dia voasoratra anarana ho toy ny endriky ny marina noho ny mpiadina ny fisian'ny drafitra sy ny fampiasana ny tany. Taratasy navoaka ao anatin'ny 3 ora.
d. Feno ny fahazoan-dalana fitsipika nomena tamin'ny endrika, ny soso-kevitra, ny fananganana ny orinasa, ny tany zo ho nilaina hahatonga ny fiandohan 'asa an-tsaha. Misy fepetra izay azo arahina teo amin'ny talohan'ny famoahana ny didim-panjakana amin'ny Rights ny fampiasana ny tany.
d. Ny fikojakojana ny vanim-potoana (fepetra tokony ho feno):
Hak Guna Usaha: hatramin'ny 30-90 andro ny 20 andro fiasana (hatramin'ny 200 hektara), na ny 45 andro fiasana (> 200 hektara)
Extension / Fanavaozana HGU: hatramin'ny 20-50 andro ny 7 andro fiasana (hatramin'ny 200 hektara), na ny 14 andro fiasana (> 200 hektara)
Fangatahana Broking / zo hampiasa: from 20-50 andro fiasana ny 20 andro fiasana (hatramin'ny 15 hektara) na 30 andro fiasana (> 15 hektara)
Extension / Fanavaozana Broking / zo hampiasa: from 20-50 andro fiasana ny 5 andro fiasana (hatramin'ny 15 hektara) na 7 andro fiasana (> 15 hektara)
Land Rights: 5 andro fiasana ny 1 andro fiasana
Ponenana ny fitarainana: 5 andro fiasana ny 2 asa andro
f. Ao amin'ny fanitarana ny zo ny fampiasana ny tany dia mifototra amin'ny ny fanombanana ny amin'ny fitantanana sy ny fampiasana ny tany (anisan'izany ny lehibe Hanaraha-maso) avy amin'ny tany manan-danja intsony tahaka ny voalohany ampiasaina fanangonan-tsonia fepetra.
Senior lefitry ny governoran'i Indonezia Bank Adityaswara Mirza nilaza fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsena ara-bola no nihatsara noho ny anton-javatra ivelany sy anatiny.
Anton-javatra ivelany, Mirza nilaza fa ny sarin-ny United States toe-karena dia niaina kely ny fahalemena, indrindra amin'ny sehatry ny asa. Ny zavatra iray hafa dia ny vokatry ny fiakaran'ny zanabola dia manomboka hanodina. "Mpandray anjara voalohany tsena maro mialoha ny Leo zanabola fiakaran'ny tamin'ny Oktobra na Desambra, fa toa niova ho ny ampahefatry faminaniana 1 na 2 taona manaraka", hoy i Mirza.
Izany fiovana nitarika Hihatanora, ka ny speculators izay volana vitsivitsy talohan'izay efa nividy dolara teo aloha, dia izao ny manapaka fatiantoka.
To anatiny antony, ny tsena nandray tsara ny politika entana kkonomi voalohany, faharoa, ary ny fahatelo. Ireo entana mampiseho ny governemanta fanoloran-fanavaozana ara-toekarena.
"Mandritra ny fotoana maharitra, ny politika fonosana izay mety ho afaka mba hampihenana ny fiakaran'ny vidim-piainana," hoy Mirza.
Ny Governemanta nandefa ny politika ara-toekarena fahefatra fonosana
Fifanampiana mpiasa tonga ny ifantohan'ny fonosana ny politika tamin'ity indray mitoraka ity
Jakarta, Indonezia - ny governemanta nandefa boky efatra fonosana ny politika ara-toekarena tamin'ny Alakamisy, 15 Oktobra 2015. Ny tena hifantoka ao amin'ny fonosana politika tamin'ity indray mitoraka ity dia ny hahasoa ny mpiasa sy ny fampandrosoana ny Micro, madinika sy Medium Enterprises (salantsalany izay).
Mba ho azo antoka ny hahasoa ny mpiasa, ny governemanta hametraka raikipohy vaovao mba kajy ny habetsaky ny Provincial karama farany ambany (UMP)
"Ny fanjakana misy mba ho azo antoka ny mpiasa tsy ho latsaka ao amin'ny ambany karama, fa ny mpampiasa koa ny fanomezan-toky," hoy fandrindrana minisitry ny ny Toe-karena Nasution ao amin'ny valan-dresaka.
Raha ny fampandrosoana ny orinasa madinika sy salantsalany sehatra, pemerintahkan indray naroso fizarana drafitra haka aina ny Vahoaka Business Sary nahazoan-(kur) ary manome miasa renivohitra fampindramam-bola ho salantsalany izay fanondranana entana mpanamboatra.
Ireto misy hevitra ao amin'ny fahefatra politika ara-toekarena fonosana araka ny asehon'ny Nasution, Minisitry ny Asa sy ny Minisitry ny Fitantanam-bola Hanif Dhakiri Bambang Brodjonegoro,
Fandrindrana minisitry ny Toe-karena Nasution:
1. Karama ny mpiasa tokoa hiakatra isan-taona.
2. Ny Fanjakana dia misy mba hanampiana ny mpiasa mampihena ny enta-mavesatra ny vidin'ny ny fiainany amin'ny fiarovana harato amin'ny endrika ny famoahana izay Indonezia Smart Card sy Card Healthy Indonezia.
3. Formula UMP: karama farany ambany amin'ity taona ity miampy ny tahan'ny ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny firoboroboana ara-toekarena (in isan-jato). Raikipohy ity dia tsy mihatra eo amin'ny faritany valo izay karama farany ambany amin'izao fotoana izao dia mbola ambany Ilay velona Ilainy (KHL).
Valo ao amin'ny faritany, dia homena ny vanim-potoana tetezamita ny efa-taona. Nandritra ny efa-taona, ny karama farany ambany any no mahazo fanampiny increment mba hisolo vaika ny sisiny amin'ny ilaina ny KHL
Employment Minisitry ny Hanif Dhakiri:
1. fiheveranao ny fiainana Zavatra Ilaina (KHL) dia ho tanterahina isaky ny dimy taona. Ny antony dia satria araka ny fanadihadiana ny Central Bureau ny Statistics (BPS), fiovana ao amin'ny fomba fihinanana niseho isaky ny dimy taona.
2. Ao ny ho avy, tsy misy adidy ho an'ny orinasa mba hametraka ny rafitra sy ny ambaratonga ny karama. Midika izany fa tokony ho heverina karama eo amin'ny miasa taona, fahaizana, ny fanabeazana, zava-bita sy ny fampisehoana. Ho voafehin'ny ao amin'ny lalàna mihitsy.
Minisitry ny Vola Bambang Brodjonegoro:
1. Mifandray miasa renivohitra fampindramam-bola ho salantsalany izay fanondranana entana mpamokatra, Indoneziana fanondranana Famatsiam-bola Agency (LPEI) nanao tsarintany. Ny vokatra misy 30 orinasa izay manana ny hery anaty mba hahazoana miasa renivohitra fampindramam-bola.
Tax famporisihana Focus politika ara-toekarena Dia Package Boky V
Package ny governemanta politika ara-toekarena dia mbola hanamafy ny fahamarinan-toerana ara-toekarena ao anatin'ny izao tontolo izao ara-toekarena izay ihany koa ny fiantraikany slump Indonezia, nanamafy ny Filoha Joko Widodo hoy taorian'ny fivorian'ny kabinetra voafetra ny alakamisy tolakandro (22/10).
Nasution minisitry ny Raharaha Ara-toekarena ao amin'ny biraon'ny Filoha nanambara ny fonosana ny politika ara-toekarena Boky Faha-5, ao Jakarta Thursday, October 22, 2015 (VOA / Andylala).
Politika ara-toekarena Package 4 Focus olana Karama sy ny Business olona Sary nahazoan-
Ny governemanta namoaka-boky dimy politika ara-toekarena fonosana mba hampitomboana ny toe-karena ao an-toerana. Policy fonosana izay mifantoka amin'ny fandrisihana governemanta mifandray amin'ny fampihenana ny hetra.
Minisitry ny Raharaha Ara-toekarena Nasution tao amin'ny filoham-birao tao Jakarta ny alakamisy (22/10) hoy ny voalohany dia resaka politika ny hetra fanampiana famporisihana ao amin'ny revaluation ny orinasa fananana, na eo amin'ny Fanjakana Fananan'ny Enterprises (SOEs) sy ny antoko tsy miankina. Hoy Nasution nandritra ny orinasa no tsy te-hanao ny revaluation toe-bola, satria ny hetra dia avo ny tahan'ny ampy. Ary hoy izy: raha ny pananana revaluation atao, indrindra noho ny fananany fananan'ny, dia afaka manao ny zava-dehibe ny fananana ny orinasa nitombo.
"Eny, raha manao revaluation Avy eo, dia hampitombo ny fahafahany. Izany dia miteraka fahafahana sy ny ara-bola fampisehoana Nitombo iray manan-danja be. Raha ny marina dia tany taty aoriana taona dia afaka manao lehibe kokoa tombony. Total fananana dia hitombo. Hoe 100%, na 200 %, dia mety ho kokoa, "hoy Nasution.
Toy izany koa dia nisy nampita ny Minisitry ny Vola Bambang Brodjonegoro, milaza ny revaluation dia fanitsiana ny lanjan'ny ny fananan'ny ny orinasa araka ny amin'izao fotoana izao vidiny ara-drariny. Bambang Nanazava, matetika vola hetra (VAT) fa ny tanjon'ny revaluation toe-bola pegged 10 isan-jato, fa ny tahan'ny nanapaka vanim-potoana anankiray.
"Fa mpandoa hetra (WP), rehefa mitanjozotra ny revaluation toe-bola hatramin'ny 31 Desambra, 2015 ny habetsahan'ny manokana manjo farany ny vola miditra ny hetra revaluation dia avy amin'ny ara-dalàna 10% ny 3%. Raha atolotra ao amin'ny vanim-potoana Janoary 1 an'i Jona 30 2016, ny habetsaky ny anjara-raharahany dia 4%. Rehefa mitanjozotra 1 Jolay hatramin'ny 31 Desambra, 2016, ny farany be ny tahan'ny ny fidiram-bola manokana hetra ny 6% revaluation, "hoy i Bambang.
Fa ny faharoa politika ao amin'ny fonosana boky 5 dia ny fanafoanana hetra roa heny ho an'ny fampiasam-bola iombonana fifanarahana ny Real Estate fampiasam-bola vola na matetika fantatra amin'ny anarana hoe REITs (Real Estate Investment Trust). Araka ny Bambang dia ahitana tsotra Fiarovana navoakan'ny ny orinasa eo amin'ny onitra na antony fananana toy ny fananany na ny foto-drafitrasa.
Bambang nanampy, "Noho ny PMK fa tsy ho ela handany ny herinandro, dia avo roa heny ny hetra, indrindra ho an'ny orinasa afa-tsy amin'ny tanjona akandihilangkan ho tokana hetra. Araka izany koa no andrasana ny anatrehan'ny ity fitaovana KIK Dire mety ho hita ao amin'ny indonezianina renivohitra tsena, ary ny misarika fampiasam-bola ho an'ny no nanaovana izany an-tany hafa. "
Mandritra izany fotoana izany, ny ara-bola Services Fahefana (FSA) koa dia namoaka politika vaovao izay mifantoka amin'ny banky Islamika. Filohan'ny Commissioners ny Birao ny FSA, Muliaman D. Hadada, ny politika vaovao dia zava-dehibe, satria teo aloha efatra fonosana politika navoakan'ny ny FSA, Bank Indonezia (Bi), ary ny governemanta mbola ho tonga ny sehatra ara-bola iray manontolo.
Araka ny Hadada, ny Sharia orinasa dia tsy nahazo anjara.
"Voalohany, dia ny mora ny vokatra sy ny asa ny silamo banky. Ny rafitra ny fahazoan-dalana sy ny fandaniana Silamo vokatra dia ho mora. Amin'ny disederahanakan, dia tsy ilaina ny mangataka fahazoan-dalana dia tsy maintsy mandefa taratasy noho ny Sharia vokatra ho Hazavaina ao amin'ny boky. Raha ny vokatra efa misy, dia tsy ilaina fahazoan-dalana indray, milaza fotsiny izany, "hoy izy.
Fahazoan-dalana rafitra vokatra hafa tafiditra ao amin'ny sehatra bebe kokoa ny Sharia Hadada, dia ahitana volamena kilalaon'ny Sharia, izay ihany koa dia tsy mila mangataka fahazoan-dalana.
Ao amin'ny valan-dresaka nanatrika ny maro mpanao fanompoam-pivavahana, anisan'izany ny Minisitry ny Toe-karena Raharaha Nasution, fandrindrana minisitry ny Maritime Rizal Ramli, Governoran'i Bank Indonezia Agus Martowardojo, Minisitry ny Vola Bambang Brodjonegoro sy Filohan'ny amin'ny ara-bola Services Fahefana FSA Hadada Hadada i - Filoha Joko Widodo hoy ny governemanta fa hanao izay rehetra azo atao mba hanamafisana fahamarinan-toerana ara-toekarena eo anivon'ireo izao tontolo izao ara-toekarena izay ihany koa ny fiantraikany slump Indonezia.
Ny filoha ihany koa miantoka ny governemanta fonosana politika ara-toekarena dia hitohy.
"Noho izany, ny entana dia mbola hanohy amin'ny Bank Indonezia koa amin'ny FSA. Avy 1,2,3,4,5 ho mbola amin'ny 6,7,8 angamba hatramin'ny 100 angamba hatramin'ny 300 200. Angamba umpteenth. Fa mazava, ny tsy miovaova ny fotoana dia te-hanome fahatsapana mahery vaika aho fa ny fikasany hanova ny fototry ny ny toekarem-pirenena. Iza Mazava ho azy fa tiantsika ny vahoaka sy ny orinasa mahafantatra fa isika dia manohy ny asany mereform fitsipika sy ny bureaucratization, "hoy ny Filoha. (VOA)
Faha-enina fonosana ara-toekarena ho an'ny '-tanàna manodidina'
Ara-toekarena manokana Zones no antenaina mba hamelombelona ny toe-karena any ambanivohitra.
Enina dingana ny politika ara-toekarena fonosana, ankoatra ny hafa, mivantana ao anatin'ny ezaka ny hifindra ny toe-karena tao amin'ny tanàna manodidina, hoy Minisitry ny Raharaha Ara-toekarena Nasution.
Ankoatra izany, ny fandrindrana Minisitry (fandrindrana) Nasution Raharaha Ara-toekarena nilaza politika ara-toekarena fonosana amin'ity indray mitoraka ity ihany koa ny hifantoka amin'ny hetra, fitantanana loharanon-drano, sy ny fanafody.
"Raha tsorina, amin'ny alalan'ny izany fonosana, dia misy faritra sasany ao amin'ny faritra tapa-kevitra ny ho ny Manokana Toe-karena Zone (SEZ), izay tena tanjona dia ny fandraisantsika ny misy loharanon-karena ao amin'ny faritra sy ny any an-dafin'i," hoy Nasution tao amin'ny biraony, alakamisy (5/11) ,
Faritra ara-toekarena manokana
SEI Mangke sy Tanjung API-API (North Sumatra)
Ary ireo faritra ara-toekarena valo nanorina ny governemanta fitsipika ho faritra manokana izay ho mandroso, izany hoe Tanjung Lesung in Banten faritanin'i, SEI Mangke sy Tanjung API-API (North Sumatra), Palu (Afovoany Sulawesi), Bitung (Avaratra Sulawesi), Mandalika ( West Nusa Tenggara), Morotai (Avaratra Maluku), ary Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Barat).
Ao amin'ny faritra ara-toekarena manokana izay nanome toerana ny hetra isan-karazany famporisihana, indrindra indostria izay loharanon-karena eo an-toerana manodidina ny fandraisana KEK sy hihaona amin'ny fepetra voafaritra.
"Izany no handrisihana ny fampifanarahana ny raharaham-barotra sy ny orinasa toetrandro tsara," hoy Nasution.
Nasution hoy ny politika tamin'ity indray mitoraka ity dia ahitana ihany koa ny fitantanana ny loharanon-karena rano ary koa ny sakafo sy ny zava-mahadomelina ny raharaha no ampiasaina BPOM.
Ny governemantan'ny filoha Jokowi mandraka ankehitriny efa nandefa ny fonosana ny politika ara-toekarena enina.
Eo amin'ny fitantanana ny rano loharanon-karena, ny governemanta izay niorina ny politika amin'ny Fitsarana Lalampanorenana fanapahan-kevitra izay tsy mamela ny fitantanana ny rano ara-barotra loharanon-karena avy amin'ny sehatra tsy miankina.
Na izany aza, raha ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana teo, ny governemanta no nanome alalana ny orinasa isan-karazany, fa tsy hoe rano anaty tavoahangy orinasa.
Noho izany, hoy Nasution, ny orinasa dia hanohy hiasa araka alalana "mandra-ny fahazoan-dàlana Tapitra na mandra-misy lalàna vaovao".
Mikasika ny sakafo sy ny zava-mahadomelina fitsipika, Nasution mampiharihary zava-mahadomelina nanafatra simplification fahazoan-dalana.
Izany no iray fonosana ny politika ara-toekarena enina napetraky ny governemanta hatramin'ny Filoha Jokowi manao prombakan kabinetra.
Diiluncurkan fotoana voalohany, Nasution fa ny fonosana ny fanavaozana ara-toekarena ilaina mba handroaka indray ny toe-karena dia lasa miadana kokoa.
Fanatsarana ny taha entana 5 INDONESIA maneran-tany
Tokony ho faly mitodika sasany vokatra fambolena sy ny toeram-pambolena dia tena maneran-tany Indonezia. Anivon'ireo ny amin'izao fotoana izao tondraka ny fanafarana ny mpanjifa entana avy any ivelany, ny fambolena sy ny toeram-pambolena entana dia mbola ho entam-barotra iraisam-pirenena ao amin'ny kianja filalaovana. Tamin'ity indray mitoraka ity Hodinihintsika kely momba ny fambolena sy ny 5 Indoneziana toeram-pambolena entana maneran-tany.
Indonezia nataony ny tenako ho toy ny mpamokatra ny bontolony menaka palmie eto amin'izao tontolo izao. Tamin'ny 2011 Indonezia mibahana izao tontolo izao tsena ny menaka voanio bontolony ny 47% hisongona Malezia eo amin'ny 2 toerana amin'ny 39%. Fanondranana ny menaka voanio afaka mandray anjara firenena vahiny ny USD 14 lavitrisa tamin'ny 2010, ary antenaina mba hitombo be isan ketahunnya.
Nanomboka ny fotoana hatry ny ela be, Indonezia no nalaza noho ny zava-manitra. Zava-manitra zava-maniry izay Mihamatanjaka any Indonezia mba hisarika ny firenena hafa mba menguasainnya. Tsy azo ihodivirana fa tamin'ny lasa nanan-karena ny firenena vahiny maro noho ny zava-manitra avy any Indonezia, izay manana tena sarobidy. Mandraka ankehitriny, Indonezia no mpanondrana zava-manitra lehibe eto amin'izao tontolo izao, anisan'izany ny nutmeg (no. 1), kanelina (no. 1), jirofo (tsy 1) sy dipoavatra (no. 2).
Indonezia moa no No. 3 eto amin'izao tontolo izao kakao taorian'ny Côte d'Ivoire sy Ghana. Production mitsaha-mitombo eo ho eo 3,5% isan-taona, amin'ny 2014 ny governemanta natolotra ho nandresy ny firenena roa ho an'ny laharana voalohany ho toy ny lehibe indrindra eran-kakaô mpamokatra. Tamin'ny taona 2010 ny Indoneziana famokarana cacao nahatratra 574 arivo taonina, isaina ho 16% ny izao tontolo izao kakao famokarana, raha ny Côte d'Ivoire ao amin'ny laharana voalohany amin'ny 1,6 tapitrisa taonina, isaina ho 44%.
Indonezia laharana faharoa taorian'ny Thailand ho toy ny mpamatsy ny bontolony fingotra. Misy milaza Indonezia toy ny ditin tontolo arabo. Na dia eo aza very eo amin'ny ny isa sy mamokatra ny fingotra fambolena, fa ny Indoneziana touted fingotra toy ny toetra mitaona indray ny fingotra avy any Thailand. Tamin'ny 2011, fingotra famokarana ao Indonezia nahatratra 2.8 tapitrisa taonina.
Indonezia amin'izao fotoana izao laharana fahatelo izao tontolo izao ho toy ny mpamokatra kafe eo ambany Brezila sy Kolombia. Basarnya famokarana kafe Indonezia isan-taona eo ho eo ny 600 arivo taonina. Avy izany dia afaka manome endrika Indonezia 7% tontolo izao ny kafe.
Famokarana iankinan'ny Exchange
Menpar hoy Indonezia ambony eo amin'ny toerana mpizaha tany, ny vidin'ny fifaninanana fizahan-tany sy ny fizahan-tany laharam-pahamehana.
Indonezia Dia Izay fototry sehatry ny fizahan-tany mpamokatra DevisaGili Lawa Dalat, Lombok, Indonezia (Michele Westmorland / Corbis)
Minisitry ny Fizahan-tany Arief Yahya hoy indray ny governemanta hametraka ny fizahantany ho toy ny sehatra lehibe, miaraka amin'ny nitarika sehatry ny fifanakalozana vahiny earner Indonezia.
Izany no nalefanareo fivoriana mihidy manokana ny fizahan-tany ao Bogor Lapam-panjakana, ny Alatsinainy (16/2), ary naseho teo am-baravaran'ny ny National Conference ny Association Indoneziana Hotels sy Restaurants, Talata (17/2).
"Ny fiantraikan'ny-kevitra toy izany, raha ny faritra no napetraka ho faritra stratejika-pirenena, ny sehatra dia hanohana drafitra fa ohatra ny Minisiteran'ny Asa-bahoaka handamina ny lalana," hoy izy.
Nilaza koa izy fa tena manana tombony Indonezia eo amin'ny lafiny mpizaha tany toerana, ny vidin'ny fifaninanana fizahan-tany sy ny fizahan-tany laharam-pahamehana.
Raha amin'ny lafiny iray hafa, Ariel nambaran'ny ny angona Travel and Tourism fifaninanana Index nangonin'ny ny World Economic Forum, Indonezia no eo amin'ny laharana 140 70 ny firenena.
"Isika handamina ny tsy fahampiana ny fizahan-tany toy ny fizahan-tany foto-drafitrasa, ny Fampahalalam-baovao sy ny fizahan-tany, ary ny ara-pahasalamana" hoy izy nanampy.
Izany, izy nanampy, ho fanamby lehibe indrindra. Dia nanantena indonezianina fizahan-tany dia hitombo haingana ka ho lasa iankinan'ny orinasa ny Indonezia, ankoatra ny solika, entona, ary ny menaka voanio.
TKI Anjara-panjakana Raharaham-bahiny Exchange taorian'ny faharoa lehibe indrindra solika
vahiny homarinana avy amin'ny Indoneziana Mpiasa (TKI) mbola laharana faharoa ihany ny solika sy ny entona sehatry (solika sy ny entona).
Tamin'ny taona 2009 fotsiny mpiasa mpifindra monina avy any ivelany amin'ny alalan'ny famindram-bola ny fanaterana ny any amin'ny firenena nahatratra 6,617 miliara $ US.
"Mpiasa mpifindra monina anjara amin'ny vahiny fifanakalozana faharoa lehibe indrindra aorian'ny solika sy ny entona," hoy Filohan'ny Fotoana Shift (tanan'ny) Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria (Kadin) Adi Putra Tahir ao amin'ny National Seminar namaha ny fametrahana sy ny fiarovana ny mpiasa any ivelany, amin'ny Bidakara Hotel, Jakarta, Wednesday (2/6).
Dia hoy izy fametrahana ny politika sy ny fiarovana ny Indonezianina Mpiasa (TKI) dia mbola tsy tandrify. Dia hoy izy revamping ny olana ny fametrahana sy ny fiarovana ny mpiasa mpifindra monina dia tokony ho voalamina tsara-pirenena sy ny ivo hetsika.
"Manantena aho izao mba ho hetsika-pirenena, madio sy milamina, mpandray anjara dia tsy maintsy mandeha synergistic. Mila fiheverana manokana avy amin'ny fandraisana mpiasa, fametrahana, ary na dia ny fiarovana, "hoy Adi.
Araka ny Adi, ny isan'ny mpiasa, izay miasa any ivelany dia tsy azo nisaraka tamin'ny asa nataon'ny governemanta mbola voafetra. Ny tahan'ny fitomboana ara-toekarena Tombanana amin'ny 6% no mbola tsy manandratra ny fisian'ny asa ao amin'ny firenena.
Mifototra amin'ny angona avy any amin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny ny isan'ny mpiasa miasa any ivelany, izay nahatratra 3,246 tapitrisa niparitaka manerana firenena maro. Ny avy izany vola tamin'ny 2009 toe-javatra nampidi-doza tamin'ny mpiasa mpifindra monina ny nahatratra 69 004 ny olona.
Indonezia afaka hametraka mpiasa vahiny (TKI) ho 10 tapitrisa ny olona, ​​na ny tokony ho dimy isan-jaton'ny mponina.
Izany no nambaran'ny Filohan'ny Komity ny Maharitra amin'ny asa ny Raharaham-bahiny ao amin'ny Antenimieran'ny varotra, Nurfaizi, ao amin'ny seminera tamin'ny mpiasa mpifindra monina nokarakarain'ny ny Antenimieran'ny varotra ao Jakarta, Wednesday (2/6).
Nurfaizi izay ihany koa ny Filohan'ny Fikambanan'ny orinasa Services TKI (APJATI) dia hoharina amin'ny Filipina, izay efa nanisy 10 isan-jaton'ny mponina mba hiasa any ivelany.
"Ny vokatra, ny Filipina raked hifanakalo hatramin'ny 15 arivo tapitrisa dolara isan-taona ary ny lehibe indrindra ho lasa mpamokatra ny manontolo niteraka fifanakalozana vahiny ny governemanta Filipiana," hoy izy.
Tao anatin'ny dimy taona, dia nanao hoe: ny fametrahana ny mpiasa mpifindra monina efa nahatratra efatra tapitrisa ary nikendry mba hampitombo ny efatra tapitrisa ato anatin'ny roa taona.
"Izany no rehefa tohanan'ny antoko rehetra sy ny fanoloran-tena tsy tapaka governemanta," hoy izy.
Mampitombo ny isan'ny mpiasa mpifindra monina miaraka amin'ny fitomboan'ny 21 isan-jato isan-taona manomboka amin'ny 2004, izay nahatratra ny 380 690 ny olona ho 696 743 ny olona tamin'ny 2007 miaraka amin'ny toerana tany Moyen-Orient sy Azia Pasifika.
Nurfaizi hoy ny fametrahana ny mpiasa mpifindra monina any amin'ny sehatra tsy ara-potoana mbola anjakan'ny ny 78 isan-jato, raha nametraka ho an'ny Azia faritra Pasifika eo amin'ny sehatra ara mety hahatratra 52 isan-jato tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Amin'ny ankapobeny, hoy izy, misy ny fitomboan'ny isan'ny mpiasa mpifindra monina izay tsy hita ho toy ny fahombiazana ny fametrahana TKI fandaharana, fa koa ny fitomboan'ny isan'ny mpiasa izay mitanila any amin'ny fisian'ny asa ao amin'ny firenena.
Nanonona tahirin-kevitra Kemnakertrans, Tale Jeneralin'ny Protocol sy Kaonsiliny raharahan 'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, Lutfi Rauf, nanao hoe: nisy 2.8 tapitrisa mpiasa mpifindra monina ao ny fe-potoana 2005-2009 miaraka amin'ny "fahabetsahan'ny famindram-bola" (famindram-bola ny mpiasa mpifindra monina an-tany) nahatratra 6617 US dolara tamin'ny taona 2009 ny 69 004 mpiasa mpifindra monina olana nandritra ny 2009.
Nandritra ny 2009, ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny ao amin'ny fandrindrana amin'ny Indoneziana no soa aman-tsara ny solontenan'ny nitady ny fahatanterahan'ny ny zo fototra ny mpiasa izay miaina olana any ivelany ny zo fototra ny nanangona nahatratra 326 495 438 750 dolara sy Singapore US dolara.
Ao amin'ny Janoary-May 2010, ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny sy ny Indoneziana no soa aman-tsara ny solontenan'ny nanamora ny fahatanterahan'ny ny zo fototra ny mpiasa mpifindra monina araka 156 416 dolara, Rp185.736.941, Emirà Arabo Mitambatra dirham 1,845, 4,800 riyals sy 140,000 dolara Singapore.
Ny toe-javatra ny mpiasa mpifindra monina dia ahitana handraisam-bola ny karama, ara-nofo, dia karama ambany karama, maltreatment, vono olona, ​​ny asa loza, "fanondranana" (fanondranana), fifindra-monina fanitsakitsahana, sy ny sisa.
Lutfi hoy ny vato misakana dia nahita tao amin'ny fiarovana ny olom-pirenena, ankoatra ny hafa, ny tsy fanajana lalàna sy fitsipika, tamin'ny fitondrana any Indonezia dia tsy nanana tonta fifanarahana amin'ny tany rehetra ny mpiasa mpifindra monina, fandefasana tsy ara-dalàna ireo mpiasa mpifindra monina, ary ny mpiasa izay tsy mahay.
Marty Natalegawa Minisitry ny Raharaham-bahiny ao amin'ny fihainoana amin'ny Commission I avy amin'ny Antenimeram-Pirenena tamin'ny 2 Desambra, 2009 hoy ny olana momba ny fiarovana ny olom-pirenena Indoneziana any ivelany dia laharam-pahamehana Minisiteran'ny Raharaham-bahiny.
Indonezianina toe-karena laharan'ny 9 Tontolo Izao
Mediawarga.info - The World Bank laharana faha Indonezia toy ny faha-9 toekarena lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Indonezia harin-karena faobe tamin'ny faran'ny 2014 US $ 2,55 tonga tapitrisa tapitrisa. Io toerana manilika ny UK ihany GDP US $ 2.4 tapitrisa tapitrisa.
Ny lanjan'izy ireo dia kajy ara-toekarena toy ny vokatry ny fampitahana ny mividy herin 'ny fananana na asa ao amin'ny firenena, ny karazana fananana na asa mitovy mampiasa vola any US dolara. Io teny dia fantatra amin'ny fahefa-mividy parity (PPP). Ohatra, The Economist mampiasa ny kajy fomba mifototra amin'ny ny vidin'ny McDonald, fantatra amin'ny hoe "The Big Mac fanondroana".
DBS Bank toe-karena, Gundy Cahyadi hoy ny afovoan-toe-karena izao tontolo izao ankehitriny miovaova avy any Amerika sy Eoropa any Asia. Ny fandrosoan'ny Azia Nisava ny hevitra fa ny toe-karena dia mbola Etazonia izao tontolo izao lehibe indrindra maneran-hery izay manosika fitomboana. Araka ny fikarohana vokatry ny DBS, amin'ny ho avy, Azia hamorona mitovy ara-toekarena goavana Alemaina isaky ny telo taona. Ny vaovao voalohany ara-toekarena goavana no antenaina hitranga tamin'ny 2023, faharoa tamin'ny 2031 ary fahatelo tamin'ny 2038.
RI ara-toekarena dia hihoatra Aostralia sy Korea Atsimo tamin'ny 2030
Liputan6.com, Jakarta - Toekarena United States (US) mialoha foana mba hanehoany ny fahefana tamin'ny 2030. Nandritra izany fotoana izany, ny toekarena ny sasany-dalam-pandrosoana ihany koa tokony hahatsapa ny firongatry firenena eoropeanina sasany kosa dia tena solafaka ny filaminana any an-ambany.
Milaza ny Minisiteran'ny Fambolena, ny tany Dadatoa Sam Antenaina hijanona ny mpitarika 'izao tontolo izao ny toe-karena sy ny lehibe an-trano vokatra (harin-karena faobe) ato anatin'ny 15 taona no mialoha mba hahatratra US $ 24,8 tapitrisa tapitrisa, ny ateraky ny US $ 8 tapitrisa tapitrisa raha oharina amin'ny filazana mialoha ny harin-karena faobe tamin'ny taona ity ny US $ 16 8 tapitrisa tapitrisa.
Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny toerana faharoa no variana amin'ny Shina sy ny harin-karena faobe dia hitombo avo roa heny izany forecast ho amin'ity taona ity ho US $ 22.2 miliara sy hanampy hanidy ny ara-toekarena elanelana misy eo amin'ny Etazonia sy Asia amin'ny ankapobeny.
Toerana fahatelo no nipetrahan'ny ny India dia nilaza mialoha fa amin'ny 2015 ihany no vita harin-karena faobe fahadimy lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Kosa ao amin'ny manaraka 15 taona, India no andrasana hisongona Brezila, Angletera, Frantsa, Alemaina sy Japon. Ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI) hoy ny firenena dia hanana ny hery asa lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao ato anatin'ny 15 taona.
Raha tsaraina Japana ho sahirana firenena. Satria araka ny toe-karena tany amin'ny taona 1990 nanidina faingana, ary niaina ny miandrona dingana, Japana ny firoboroboana ara-toekarena ho miadana, fanerena ny fandaharana Japana nandatsaka ny fahefatra eo amin'ny lisitry ny firenena amin'ny toekarena lehibe indrindra eo amin'izao tontolo izao ny 2030.
"Japana no lesona manan-danja fa fomba haingana afaka mahatsapa mifandray downgrades rafitra ara-toekarena", hoy i Morgan JP lehiben'ny toekarena Bruce Kasman araka ny nolazain 'i Bloomberg, Alahady (04/12/2015).
Ankoatra ny Japana, Frantsa ihany koa mialoha handao toerana telo mba laharana 8 amin'ny PBD ny US $ 3.3 tapitrisa tapitrisa sy Italia nianjera toerana roa ho any amin'ny toerana faha-11 miaraka amin'ny PIB ny US $ 2.3 tapitrisa tapitrisa.
Mandritra izany fotoana izany, ny Indoneziana toekarena no mialoha mba ho laharana 13 ao amin'ny lisitry ny firenena lehibe indrindra toe-karena miaraka amin'ny PIB ny US $ 2.1 tapitrisa tapitrisa tamin'ny 2030, ny Aostralia amin'ny toerana 14 sy Korea Atsimo amin'ny faha-15 toerana miaraka amin'ny PIB ny US $ 1.9 tapitrisa tapitrisa.
"Misy be dia be ny tsy azo antoka. No Shina afaka mitombo 4 isan-jato sy 6 isan-jato, dia misy zavatra maro mba hijery dia ho any amin'ny eran-toe-karena. Na raha India mety mitombo ny 3 isan-jato sy 8 isan-jato. Izany no fahasamihafana lehibe rehefa mitambatra azy amin'ny andro antitra, "hoy izy.
Amin'ny ankapobeny, Jamaika no mialoha mba ho toerana ambany indrindra mba handatsa araka izay 13 hametraka 136 tamin'ny 2030. Raha Ouganda dia ho lasa ny firenena amin'ny fandrosoana lehibe indrindra satria niakatra 18 laharana any amin'ny toerana 91.
ASO LENDING Insurance August 19, 2016 at 1:30 AM